Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Eswatini Na -agbasa Akụkọ » Warningdọ aka na ntị nke US Embassy na Eswatini: Nọrọ n'ụlọ!
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọnọdụ dị na Alaeze Eswatini ka na-atụ egwu mana ọ dị ka ọ nọ n'okpuru ọchịchị gọọmentị, ebe ndị ọchịagha chere na ha ga-arụ ọrụ na mba ahụ.
Eswatini Airlink ya na onye ọrụ ya bụ Airlink, ụlọ ọrụ ụgbọelu nke ụlọ na mpaghara mpaghara South Africa, akagbuola njem taa n'etiti Johannesburg na Sikhuphe's King Mswati III International Airport na Eswatini, n'ihi ọgba aghara obodo na Alaeze Eswatini.
Otu onye ọrụ gọọmenti kwuru eTurboNews: “Anyị kwenyere na e nwere ndị nnupụisi ugbu a n'obodo ahụ.”
Dabere na akwụkwọ eTN, enweghi akwụkwọ akụkọ ọ bụla taa n'ihi ọgbaghara dapụtara n'isi obodo Mbabane ụnyaahụ. Lọ ọrụ redio mba ahụ na-ekwughachi akụkọ ụnyaahụ, a kwụsịtụrụ ịntanetị n'abalị ụnyaahụ.
Ọnọdụ dị na Eswatini ka na-adị jụụ mgbe abalị gachara ebe a na-aga ịchịkwa ehihie.
eTurboNews Akụkọ banyere Eswatini jidere n'etiti Taiwan na China achikotara ihe ndabere banyere mmepe a na-aga n'ihu. O nwere ike inye anyị ndụmọdụ na ọnọdụ a nwere ike ịbụ ụzọ karịa naanị ụmụ amaala iwe na-achọ mgbanwe.
Dịka ozi sitere Eswatini, ndị ngagharị iwe mechiri Times of Eswatini akwụkwọ akụkọ maka ịkwado eze na gọọmentị. Eswatini Beverages, onye enyemaka nke SABMiller ABinBev ebe King Mswati nwere mbak ọkụ gbara ndị ngagharị iwe.
“N’ịchọpụta nchekwa na nchekwa nke ndị ahịa na ndị ọrụ anyị, yana anyị na onye ọrụ ibe anyị bụ Airlink na-akpakọrịta, anyị ekpebiela ịkwụsịtụ ọrụ anyị nwa oge n’okporo ụzọ dị n’etiti Johannesburg na Sikhuphe (Eswatini). Anyị ga-aga n'ihu na-enyocha ọnọdụ ahụ ma anyị ga-eweghachi ọrụ ndị nkịtị ozugbo ọ bụla ọ dị mma ịme ya, "Eswatini Airlink General Manager, Joseph Dlamini kwuru.
A kagburu ụgbọ elu (30 June 2021):
Ndị ọchịchị obodo ahụ nyere iwu ka ewepụ iwu n'abalị ụnyaahụ ma mechie ịntanetị. Nkwukọrịta na ụwa dị n'èzí pere mpe. Ọ dị ka ọ laala azụ ugbu a. Otu akwụkwọ gwara eTurboNews: “Akụkọ ndị ị na-ahụ ebe a abụghị ihe zuru ezu.”
Dika akuko mgbasa ozi nke onwe nke South Africa IOL si enyoghi anya, ndi oru ugbo ana enyo enyo ma mepee bọket na nkpuru Nyii (nkpuru osisi si n'osisi uhie uhie), na-acho ihe mgbawa n'okpuru ya. Mkpụrụ osisi na-etinye na ụgbọ ala site a 13 afọ girl.
Emlọ ọrụ Embassy nke United States na-adụ ụmụ amaala US niile ọdụ ka ha mara ọgba aghara obodo na Alaeze ahụ. Ọnọdụ na-eme na Eswatini, gụnyere ọkụ na ịkwakọrọ nke ụlọ ahịa, ụgbọ ala na azụmaahịa. Ngagharị iwe na-ewu na Mbabane ụtụtụ niile ma ụlọ ahịa na-emechi. Emlọ ọrụ Embassy nke United States na-agba ụmụ amaala niile ume, na mba niile, ka hachekwaa nri na mmiri wee nọrọ n'ụlọ. A gwara ndị ọrụ Embassy ka ha nọrọ n'ụlọ. A gbara ụmụ amaala US ume ka ha zere ụzọ ndị bụ isi n'ihi na ndị ngagharị iwe na-egbochi ihe ọkụ ọkụ n'ụzọ. Emlọ ọrụ US Embassy ga-anọ na-emechi site na Wednesde, Juun 30. citizensmụ amaala US chọrọ ọrụ mberede kwesịrị ịkpọ Ngalaba Consular.
Onye nnọchi anya US na-atụ aro ka nwa amaala US nọ na Eswatini mee ihe ndị a:
Ọ bụrụ na ọ dị mma, chekwaa ngwaahịa na mmiri ma nọrọ n'ụlọ.
Nyochaa mgbasa ozi mpaghara maka mmelite.
Zere ịkwọ ụgbọala